‘रोजी’ मा प्रदीप खड्काका भिन्न चार रुप « Ramailo छ
‘रोजी’ मा प्रदीप खड्काका भिन्न चार रुप
औषतमा एउटा एक्टरले एउटा फिल्मभित्र कतिवटा चरित्र चित्रण गर्छ ? एक, दुई वा तीन ? तर, भदौ २२ गते रिलिज हुने क्राइम थ्रीलर ड्रामामा प्रदीप खड्कालाई फोर एक्टमा देख्न सकिन्छ ।
उनले एउटै फिल्म भित्र चारवटा चरित्र चित्रण गरेका छन् । ‘रोजी’ निर्माताले एक्सक्लुसिभ क्यारेक्टर लुक्स आउट गर्दै प्रदीप चरित्रलाई सार्वजनिक गरे । ती चार पात्रमा मुड, मनस्थिती र मनोदशाका अलग आकृति महसुस हुन्छन् ।
पहिलोमा उनी सामान्य तर सोझा युवक, दोस्रोमा विद्यार्थी, तेस्रोमा नोस्टाल्जिक र चौंथोमा कुनै एक अपराधी टाइप छन् । ‘मेरा लागि यो अवसर पनि हो, चार चरित्र चित्रण गर्नु मेरा लागि च्यालेन्ज र अपर्चुनिटी दुबै हो’ प्रदीपले भने, ‘प्रत्येक क्यारेक्टरका आफ्नै अर्थ र सन्देश ।’
नीरक पौडेल निर्देशित फिल्मले एक सोझो युवकको क्राइमतर्फको यात्रा र उतारचढाव पेश गर्छ । नेपाली बक्स अफिसका यी क्युट अभिनेताको पात्र लुक्स पक्कै पनि फ्यानलाई सरप्राइज हुनसक्छ । प्रदीपसँग पहिलो पटक नायिका मिरुना मगर र परमिता राज्यलक्ष्मी शाहले स्क्रिन सेयर गरेका छन्
तस्विर : गोपिकृष्ण मूभिज